Epamusoro gumi Mabhenefiti eKumba otomatiki - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
kushandisa michina, Pamba Pacho, Dzimba dzakangwara
Wepamusoro gumi Bhenefiti yeImba Otomatiki
By Maia Simbi
Kufambira mberi muhunyanzvi kwauya nezvakawanda bhenefiti. Imwe yeakanyanya kugona kugona kugadzira dzimba dzakangwara. Izvi zvine, neimwe nzira, kudzikisira kugadzikana kweimba yako pauri, uye neimwe nzira ichibvumidza iyo kuti 'ifunge' pachayo ichiri kukupa iwe kutonga mune yakasarudzika, inoshanda, uye nyore nzira. Saizvozvo, musha kushandisa michina chiitiko chitsva chingangodaro chiri kutariswa nevaridzi vedzimba pakutenga misha mitsva, saka ndechimwe chinhu icho musha vamiririri vanofanirwawo kutarisa
Ehezve, kugona uku kunopa mamwe mabhenefiti pane kungokwanisa kuenderana netekinoroji yazvino, kana kuratidza iwe se tech-savvy. Heano gumi mabhenefiti e musha kushandisa michina kuti musha vamiririri vanofanira kuziva kuti vatengese kune vatengi vavo.
1. Inochengetedza nguva
Tiri kurarama munyika inomhanyisa ine zvakawanda zvekuita munguva shoma. Iwe se musha mumiriri angangodaro akaremerwa nezvikumbiro zvevatengi avo vakashuvira kuti vagone kuita multitask kana yavo purogiramu ichiita seyakawandisa. Zvakanaka, musha kushandisa michina inovabvumidza kuti vagadzirise akati wandei emabasa epamba panguva imwe chete. Semuenzaniso, ivo vanogona kutanga kuwacha, kuchenesa imba, uye kubika uchipindura maemail avo. Kugona kwekuchenesa robhoti pachako, uye muchina wakangwara uchivaudza mashambidziro anoitwa nezviziviso kufoni yavo, mabasa ese anopedzwa zvine mutsindo, vachiita ruramisiro yakawanda kurongwa hwavo.
2. Anochengetedza mari
Simba nemvura zvinodhura kupa chikamu chakakura chemari yekushandisa pamba. musha kushandisa michina inovabvumidza kusevha zvakanyanya pane izvi pasina kukanganisa kunyaradza kwako. Semuenzaniso, smart thermostat inogona kuona kana vasiri pamba uye kugadzirisa tembiricha saizvozvo. Yakanakisa shawa inovatendera kwete chete kudzora tembiricha asiwo huwandu hwemvura uye yekugeza nguva.
Kana ivo vanga vachitsvaga nzira dzekuchengetedza, kuvakurudzira yekushambidza yekushambidza seyakajeka uye tech-savvy kutanga.
3. Inovapa kutonga
Iwe unogona kunge wakamboziva nezve dambudziko risingaperi iro vanhu vanosiya ovhoni yavo ichimhanya kana mwenje iriko kana kuti vakavhara musuwo. Zvakanaka, ne kumba otomatiki, zvese zvavanofanirwa kuita kutarisa kuburikidza neapp pane yako smartphone. Vanogona kuvhara musuwo vodzima mwenje nemidziyo yekushandisa nekombi chete. Zvirinani zvakadaro, vanogona kugadzirisa imba yako ku rwoga kudzima mwenje pavanovhara musuwo pakubuda.
4. Kunowedzera kuchengeteka
chibatiso nguva dzose yave iri itiro hanya huru nokuda kwavanasaimba vazhinjisa. Thanks to musha kushandisa michina, varidzi vemba vava kugona kuwedzera chibatiso kumba. Hurukuro yekubatanidza ma detectors ekufamba ne chibatiso makamera nemabhero emusuwo akangwara mune imwe famba mudziyo. Vanosvika pakuona kuti ndiani anouya pedyo nemusuwo uye vanowana chenjedzo yekuedza-kupinda pamba kana kure.
5. Inobvumira nyore
Fungidzira uchikwanisa kudongorera mufiriji yako kuti uone kuti ndezvipi girosari rekutenga kana vari muchitoro chikuru. Kune rumwe rutivi, kukwanisa kutanga kudya kwemanheru uye kuudza thermostat kuti itange kudziya imba pavanenge vachibva kubasa. Ndizvo zvakadii zviri nyore musha kushandisa michina anovabvumira.
6. Inopa rugare rwepfungwa
Kana vaine mwana, sevabereki vazhinji, pamwe vanonetseka kuti ari kuita sei kana vasipo. Nyaya imwecheteyo inoshanda kune vanorwara kana hama dzakura dzakasiiwa dzoga pamba. Nenjere yekuchechechechechechechechechechecheche, vanogona kunyatso tarisa pamusoro uye nekuzorodza mwana wavo kubva kwavari. Wakangwara piritsi rekuparadzira anoendesa mapiritsi kuhama yavo inorwara, pamwe nekuvayeuchidza kana yave nguva yemushonga wavo.
Muchokwadi, kune akawanda maitiro epasi rose ari kushandisa iri mhando yehunyanzvi kuchengetedza vakwegura vavo. Sezvo zvave pachena, masimba ehupenyu anoita kuti zvisakwanisike kuti vana vachengete avo vekare. Nekudaro, hurongwa hwakadai huri kuvatendera kuti vave nemonitor mudzimba dzevabereki vavo kuti vaone kana vakatama mukati memba kana vaine benzi, mapiritsi, nezvimwewo, kunyangwe zvichiongororwa kubva kudivi revana, masystem aya ari kuratidzawo ive inobatsira kune vanhu vakuru, vari kushandisa tekinoroji kune avo ezuva nezuva zviitiko. Ivo vanovaudza nguva yekudya nguva yekumwa mapiritsi avo, mamiriro ekunze, uye zvimwe zvinonakidza uye zvinobatsira maficha. Nekudaro, kana vatengi vako vaine vakweguru vavasingakwanise kutarisira zuva rega rega, ita shuwa yekuvarudzira kuti vaise mari muhurongwa hwakadai uye vave 'padhuze' navo vachishandisa tekinoroji.
7. Inogadzira yakasarudzika kunzwa
Paunenge uchipedza yakawanda yezuva pamba, vatengi vangangoda kunzwa vakasununguka mune yakasarudzika uye inodziya imba. Ivo vanogona kugadzira inodiwa ambiance kubva kunyaradzo yemubhedha wavo nekungobaya pane yako smartphone. Funga adaptive magetsi, tembiricha chaiyo, uye nehungwaru mimhanzi yavo inoridza mimhanzi yavo yavanofarira.
8. Inowedzeredza zvishandiso zvinoshandiswa
Nguva dzaenda kana midziyo yemumba yasara kune rimwe basa chete. Nhasi, firiji inochengeta grocery idzva paunenge uchiverenga mabikirwo pavanenge vachibika. Ovheni haizongobika huku chete asi zvakare ichaona kuti yakabikwa kusvika pakukwana.
9. Inobatsira kuchengetedza nharaunda
Tiri kurarama munguva yatinofanira kungwarira nezvekabhoni yedu inodhinda munzvimbo. Pavanoshandisa simba nezvimwe zviwanikwa zvakanaka uye panguva yavanorida, zvinobatsira zvakatipoteredza zvakanyanya. “ musha kushandisa michina inogona kuva chaiyo inivhesitimendi, izvo zvinozobatsira zvikuru kushandisa simba nemazvo uye zvichizotungamira kune hupenyu hunogadzikana ”- vanodaro nyanzvi kubva Cold Mhepo Central.
10. Inowedzera kuchengeteka
Zvakakosha kuti tichengetedze dzimba dzedu, kunyanya tiine vana nevakweguru pamba. musha kushandisa michina inogona kubatsira neizvi kusvika pamwero wakati. Semuenzaniso, vatengi vako vanogona kuseta yakanyanya tembiricha yemvura kwavari mushawa kudzivirira tsaona.
Panguva iri kuva a musha mumiririri hazvisi nyore sezvo uchifanira kuenderera pamwe nekuenderera kuchinja zvinodiwa uye nezvinodiwa nevatengi pamwe nekutevera maitiro eatsva matsva. Vatengi vako vanoda imba inogona kuvakweretesa ruoko, uye zvakadaro uchivapa kwakanyanya kunyaradzwa pavanenge vari. Kana zvese zviri pamusoro zviri izvo zvavari kutsvaga, kumba otomatiki ndicho chinhu chinotevera kukurudzira. Ichokwadi chakakodzera iyo inivhesitimendi, uye inosimudzira yakachena uye yakasvibira dhizaini iyo pakupedzisira inobatsira nyika inogadzikana.
How Home Automation iri kuchinja bhizinesi renyika
Dai 5 | Pamba Pacho, Akangwara kushandisa michina, IoT
Imba otomatiki iri kuchinja kwete chete dzimba asi bhizinesi nyika zvakare!
5 Zvikumbiro uye Bhenefiti yeArtificial Intelligence muMotomation
Apr 18 | chakagadzirwa Intelligence, kushandisa michina
Ziva izvo zvakakosha zvinhu, chiyero, mabhenefiti, uye mashandiro eArtificial Intelligence muMotomation. Neblog ino, isu ticha deredza tekinoroji zvakadzama.
Otomatiki anogona sei kuwedzera rako bhizinesi 'kugadzirwa
Apr 13 | kushandisa michina, Akangwara kushandisa michina